Ra’iisul Wasaaraha “Doorashada waqtigii loogu tala galay ayay ku dhici doontaa” – STAR FM SOMALIA
Ra’iisul Wasaaraha “Doorashada waqtigii loogu tala galay ayay ku dhici doontaa”
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Cumar C/rashiid Cali Sharma’arke ayaa rajo ka muujiyay in doorashada ay ku dhici doonto waqtigii loogu tala galay, xilli ay soo baxayaan shaki ku aadan in mar kale dib u dhac ku yimaado Doorashada Guddoonka Baarlamaanka iyo Madaxweynaha.
Cumar C/rashiid oo ku sugan dalka Jabuuti ayaa la kulmay Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle, isagoo uga warbixiyay xaalada Soomaaliya, doorashooyinka dhowaan dhici doona, isagoo ka codsaday in Jabuuti gacan ka geysato.
Waxaa uu sheegay in Jabuuti ka dalbadeen in garwadeen ama marqaati ka noqoto doorashooyinka dhowaan dhacaya, maadaama aheyd halka lagu unkay Carte dowladdii KMG aheyd, isagoo uga mahad celiyay sida ay mar walba Soomaaliya u garab taagan yihiin.
Ra’iisul Wasaare Cumar C/rashiid ayaa sheegay in todobaadkan magaalooyinka maamul goboleedyada ka bilaaban doonaan doorashooyinka Xildhibaanada aqalka hoose, isla markaana la doorto Xildhibaanadii ugu horeeyay.
Magaalooyinka maamul goboleedyada ayaa waxaa ka socda dhaq dhaqaaqyo la xiriira doorashada aqalka hoose, waxaana ku qul qulaya Musharaxiin xilal doon ah oo raadinaya Kursi Xildhibaan.
20 ruux oo lagu soo qabtay howlgal laga sameeyay Degmada Wadajir
Wararkii ugu dambeeyay ciidamada Puntland oo Qandala ku sii siqaya